OwoZalo ukhala ngabalandeli abamxina ngesinqandi
UTHUTHUKA Mthembu owuNonka kuZalo uthi uyacela abalandeli bayeke ukumqabula uma bembona
Bongiwe Zuma | May 14, 2022
UMLINGISI womdlalo Uzalo, uthi kumthwalisa kanzima okwabalandeli abavele bamthelekele ngesinqandi emlonyeni nasebusweni.
UThuthuka Mthembu odume ngelikaNonka emdlalweni, uthi uyaqonda ukuthi abalandeli bakhe basuke benziwa wuthando, kodwa uthi kuyezwela futhi kumshiya engaphathekile kahle emoyeni ukuqatshulwa emlonyeni ngumuntu angamazi.
Ubekhuluma emsakazweni iVuma FM ohlelweni iCruise with Jacinta Ngobese. Uveze ukuthi ngesinye isikhathi uke afise ukwenza umsebenzi wakhe ngaphandle kokuduma njengoba abantu babuye bagxambukele empilweni yosaziwayo babahlambalaze nasezinkundleni zokuxhumana.
Eqhuba uthinte nendaba yokuxhashazwa kosaziwayo okubukeka kudla lubi kuleli ngisho ezinkundleni zokuxhumana babizwa ngamagama ayiziswana.
" Ngifisa engabe ngesinye isikhathi ngingakwazi ukwenza umsebenzi wami ngibuye ngiphume ngihambe ngaphandle kokuthi abantu bangibone. Ngike ngakhuluma nomunye umngani osemsakazweni eveza ukuthi bajabula kangakanani ngokuba sembhobheni kuphela. Ukuba kwithelevishini kuhambisana nokugxekwa, ukuhlambalazwa abantu babuye bangxambukele ngokweqile bangabheki ukuthi umuntu basuke bengamazi ngaleyo ndlela. Noma uyothenga isinkwa akumele ube uwena kubalabantu abakwesekayo abalindele ukuthi ubanike isikhathi sakho," kusho uThuthuka.
Ekhuluma kulolu hlelo uThuthuka uveze ukuthi ziningi izinto ezihambisana nodumo lwamanje, ukuzithuthukisa nomsebenzi nokwenza asebenze ngokuzikhandla ngethuba alitholayo. UThuthuka uveze nokuthi ukuba nezinwele eziningi neziboya emzimbeni kwamphendula isisulu samabhoklolo abafundi esikoleni. Yize kanjalo kodwa uthi ngeke manje usamthinta, izinga lokuzethemba liphezulu .
Abalaleli balolu hlelo bakhombise okukhulu ukumthakasela beveza nokuthi kuningi okuvezwa indawo kaNonka ebakhumbuza izimo abadlule kuzo empilweni nokwenza bayibone inesifundo kakhulu kwintsha.